छिमेकीलाई आफ्नो दुख: पोख्दै – nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeअन्य थप >>चुट्किलाछिमेकीलाई आफ्नो दुख: पोख्दै
२२ बैशाख २०७४, शुक्रबार २०:१० नेसा संवाददाता चुट्किला 0
एक धोविले छिमेकीलाई आफ्नो दुख: पोख्दै भनेछ – यार मेरो गधाले हरियो घाँस खाने आदत भएर सुकेको घाँस त खाँदैखाँदैन् । के गर्ने होला ?
छिमेकीले हत्त न पत्त भनेछ- धेरै सजिलो छ । मेरो भैसीले पनि सुकेको घाँस खाँदैनथ्यो मैले त हरियो चश्मा लगाइदिएको खान थाल्यो ।
दोस्रो दिन धोबीको हातखुट्टामा प्लाष्टर गरेको गरेको देखेर छिमेकीले धोविलाई सोधेछ- के भयो ?
धोविले भनेछ- के गर्ने यार गधालाई हरियो चश्मा लगाइदिदै थिएँ । गधाले दुई लात्ती हान्यो र भन्यो – मलाई भैसी सम्झिस् की क्या हो र ?